Isebenza njani ilayisensi yeMicrostation V8 -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Indlela i-Microstation ilayisenisi yeV8 isebenza ngayo
Indlela i-Microstation ilayisenisi yeV8 isebenza ngayo
Ukucacisa, ukuba le ayisiyonto yokuqhekeza, uphendula kuphela umbuzo ovela kumntu obuze ukuba ilawulwa njani ilayisenisi ye-Microstation V8.
Le yindlela yeshishini apho ilayisensi ilawulwa ngumncedisi welayisensi, esisicelo seBentley Select abasebenzisi ngaphambi kwe-v8.9 (XM), evumela ukushiya ikhompyuter apho iilayisenisi zilawulwa khona; Iinguqulelo ze-XM sele zibandakanya khetha iseva ifakiwe. Lo mncedisi welayisensi lukhetho olufanelekileyo, kuba ungakhangela iphepha-mvume, ukuba uya kusebenza ngaphandle kweintanethi okanye kwiLaptop, ukuphuma kungayinyanga enye ngokomzekelo emva kwelo xesha kuyafuneka kunxibelelana kwakhona ukuvuselela ilayisensi.
Kule meko, ifayile yelayisensi yomatshini ngamnye inikezela kuphela i-url yekhompyuter eneseva yelayisensi efakiweyo.
Kukwaluncedo lokuba neseva selayisensi kuba banokulawulwa ngokududileyo, ukuba ilayisensi ayisebenzi, iyafumaneka; Umncedisi ulawula ukuba bangaphi abasebenzayo nabalumkileyo xa begqityiwe. Umzekelo woku kukuba nelayisensi enye (okanye ezimbalwa) yesicelo esingasetyenziswa ngokubanzi, kodwa sifumaneka nakubani na kwinethiwekhi; Oko ingavumeli abasebenzisi abasebenza ngokufanayo.
Ewe, ndiyakhumbula ukuba ngobunye ubusuku, kwafuneka sivelise iimaphu ezithile eziye zaveliswa sisicelo se-vba esathatha ixesha, savula ezininzi baninzi Amaxesha e-Microstation kumatshini ngamnye, sishiya iinkqubo zisebenza kwaye sahamba kulala kwi karaoke. Kude kube lelo xesha saqonda ukuba isicelo ngasinye esivulekileyo sasiyilayisensi entsha, kusasa abo bavuka kwakusasa kwezinye iiofisi bafumanisa ukuba akukho mvume zikhoyo. hehe, indlela elungileyo yokubabonisa ukuba sihlala kude kube yintsimbi yesithathu… nangaphezulu emva kweeCoronas.
Iicompyuter ezingadityaniswanga kwiseva yelayisensi, Microstation ukuya kwiinguqulelo 8.5 Bentley zisombulule iserver yelayisensi kusetyenziswa isifaniso sendawo.
Ngaphakathi kwisakhelo sefayile ye-XNUMX yi:
c: / Inkqubo yeefayile / i-bentley / ilayisenisi
Kukho iifayile zelayisensi ezingamaxwebhu enolwandiso .lic, ngaphakathi kwento abanayo isitshixo sokuvula somatshini, inani elifana neli-138.
Kwiprogram nganye kukho ifayile eyahlukileyo, umzekelo we-Microstation msv8.lic, kwiiGographics msgeo.lic , kwi-geopack geopack.lic y así kwabanye.
Le ndlela indala kakhulu, ukuba uyakhumbula iMicrostation J ibizwa ngokuba msj.lic I-Microstation SE ibizwa ustation.lic, kwi-Microstation 95 ms95.lic nangona ngelo xesha ilayisensi enye ilawula izicelo ezininzi, bendinamanani amaninzi kuphela kunye nelayisensi yeArcVview ukuba bayandivumela ukuba ndidibanise i-chicha ne-lemade.
Xa i-Microstation efakwe, Uhlobo olusemthethweni ngaphandle kweseva yelayisensi, icela isitshixo sokuvula kwaye igcinwe njengendlela yelayisensi kwifayile ye-276 kb kuphela ebizwa licnsmgr.dll okuku:
c: / Inkqubo yeeFayile / i-bentley / inkqubo / i-microstation
Le fayile isebenza njengeseva yelayisensi, yiyo loo nto i-XNUMX kwakusatshixiwe ngenxa yokuba umoni onesono wayeya kuthatha iifayile zabo babhukuqayo kwi-Intanethi kwaye sele beyenza.
Iinguqu ze-XM zenziwe ngenye indlela wokusebenza kwelayisensi, siphawula olunye usuku.
I-Google ivula isiphequluli sayo
Ukuqala izifundo zeCadastre, i-1 iveki
jan niemeijer uthi:
wat kost een licencee voor een elementi die die thuis zazg wil gaan met microstation
tokomst wil in wel wahlangana software de werken namelijk
UAlgis A. Calvo uthi:
Ndifumana njani ilayisenisi yokusebenzisa i-Microstation V7?